China Vapor Recovery Valve စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ Jiasheng
1.Aluminum အလွိုင်းသေဆုံး - သွန်းဖွဲ့စည်းပုံ, anodized ကုသမှု။
၂။ ပိုမိုကြီးမားသောနွေ ဦး တင်းမာမှု၊ ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီးတင်းကျပ်သောတံဆိပ်ခတ်ခြင်း။
၃။ အဆင့်မြင့်စီးဆင်းမှု၊ ဖိအားကျဆင်းခြင်း။
အားလုံး TTMA အနားကွပ်နှင့်အတူရရှိနိုင်ပါသည်။
6. ဖွင့်ပွဲနှင့်ပိတ်ပစ်ကိုထိန်းချုပ်ရန် pneumatic controller ကိုအသုံးပြုခြင်း။
8. 1/4 NPT လေကြောင်း lineholes ။
၉။ EN13083 စံသတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည်။ အနားကွပ်သည် TTMA စံနှင့်ကိုက်ညီသည်။
Manhole Cover သို့မဟုတ် Tanker ၏ထိပ်တွင်တပ်ဆင်ရန်။ ထွက်ပေါက်ဘက်မှရော်ဘာရေပိုက်နှင့်အငွေ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးပိုက်လိုင်းနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ရေနံတင်သင်္ဘောသည်အငွေ့များကိုထိန်းချုပ်ရန်တင်သို့မဟုတ်လွှတ်လိုက်သောအခါ tanker ထဲသို့ ၀ င်လာသည်။ ၎င်းသည်အငွေ့ပြန်ထစေသောစနစ်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
ထုတ်ကုန်အမည် လောင်စာဆီ tanker ငွေ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအဆို့ရှင်
အပူချိန်အကွာအဝေး -20 ℃ - + 70 ℃
အသုံးပြုရန်အတွက်လမ်းညွှန် နှင့်၏အားသာချက်များ လူမီနီယံအလွိုင်းလောင်စာဆီရေနံတင်သင်္ဘောပြန်လည်ထူထောင်ရေးအဆို့ရှင်
Manhole Cover သို့မဟုတ် Tanker ၏ထိပ်တွင်တပ်ဆင်ရန်။ ထွက်ပေါက်ဘက်မှရော်ဘာရေပိုက်နှင့်အငွေ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးပိုက်လိုင်းနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။
* Hardening ကုသမှု
* အဓိကကိုယ်ထည်ကိုအလူမီနီယမ်အလွိုင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၎င်းသည်ပိုမိုပေါ့ပါး။ ပိုမိုခိုင်ခံ့သည်။
ပစ္စည်းအမည် အခိုးအငွေ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအဆို့ရှင် မော်ဒယ်နံပါတ် YJ7509
အဓိကပစ္စည်း လူမီနီယမ် အရွယ်အစား: ၄″
operating နည်းလမ်း အဆုတ် အလုပ်လုပ်ဖိအား 0.6MPa
ချိတ်ဆက်မှုစနစ် Thread အပူချိန်အကွာအဝေး -20 ~ + 70 ℃
အလယ်အလတ် ဒီဇယ်၊ ဓာတ်ဆီ၊ ရေနံဆီ စံ API1004 & EN13083
အတွင်းပိုင်းပြန်သုံးများအတွက်တင်နှင့်ချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၌ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ယိုစိမ့်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်အခိုးအငွေ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအဆို့ရှင်ကိုလူကိုအဖုံးသို့မဟုတ် tanker ၏ထိပ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်။
တင့်ကားထရပ်ကားသည်ကုန်ချနေစဉ်ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့စီးဆင်းမှု၊ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်မှု၊ ထိရောက်သောတံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့်တင့်ကားဖိအားချိန်ခွင်လျှာကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက် poppet အဆို့ရှင်ကိုဖွင့်ရန် pneumatic controller ကိုအသုံးပြုသည်။
operating နည်းလမ်း အဆုတ်
အလယ်အလတ် ဓာတ်ဆီ၊ ရေနံဆီ၊ ဒီဇယ်
အပူချိန် Range -20 ~ + 70 ℃
စံ EN13083 စံ၊ အနားကွပ်သည် TTMA စံနှင့်ကိုက်ညီသည်။
ရှေ့သို့ Frence API Adapter Valve ကို
နောက်တစ်ခု: ငွေ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေး adapter
Fuel Tank API ဖုန်ထူအဖုံး
နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကုန်ပစ္စည်းအမည် Api adapter အဆို့ရှင်လောင်စာဖုန်မှုန့်ထုပ်ပုံမှန်အချင်း ၄ လက်မပုံမှန်ဖိအား 0.6Mpa ပွင့်လင်း mode လက်စွဲပစ္စည်းများအလူမီနီယမ်အလွိုင်းအလယ်အလတ်ဒီဇယ် / ဓာတ်ဆီအလုပ်လုပ်အပူချိန် - + 70 ℃ -40 ℃ API adapter အဆို့ရှင်လောင်စာဖုန်မှုန့်အကာအရံကာကွယ်မှုတိုင်ကီအောက်ခြေအဆို့ရှင်နှင့်တိုက်မိခြင်း အခမဲ့၊ ပိတ်ထားသောအဖုံးသည်အဆင်ပြေ။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောချိတ်ဆက်မှု၊ ရာဘာ gasket တံဆိပ်ခတ်ထားခြင်းကြောင့်အားနည်းချက်များကိုထိရောက်စွာတားဆီးနိုင်သည်။
လျှပ်စစ်စည်ပန့်သည်စည်သို့မဟုတ်အလားတူကန်များမှသန့်ရှင်း။ အနိမ့်စားသော၊ အနိမ့် viscosity အရည်ကိုလွှဲပြောင်းနိုင်သည်။ ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ၊ နို့၊ သောက်စရာနှင့်ဓာတုပစ္စည်းအမျိုးမျိုးတို့ပါ ၀ င်သည်။ ဓာတ်ဆီ၊ မက်သနော၊ အရက်၊ အင်ဂျင်ဝိုင် ၂၂၀ ဗို့အားပေါက်ကွဲမှုကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သောမော်တာမှထုတ်ယူသောတံဆိပ်၊ ဆီ၊ စက်ဆီ၊ ဓာတုအရည်၊
5- ဝါယာကြိုး Overfill Optic Probe နှင့် Socket
optic sensor စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုရေနံတင်ကန် manhole အဖုံး၏ထိပ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ ၎င်းသည်ကာကွယ်ခြင်းလျှံကျခြင်းကာကွယ်မှုကိရိယာဖြစ်သည်။ ရေနံဆီတိုင်ကီထဲသို့ဖြည့်ရန်ခွင့်ပြုပါက၎င်းသည်ရေနံအဆင့်ကော်ဒွန်ကိုစစ်ဆေးပြီးထိန်းချုပ်သည်။ ဆီသည် Cordon သို့တက်သောအခါဆီသည်ရေနံများမ ၀ င်ခြင်းသို့မဟုတ်ရှောင်ထွက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်သတိပေးလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အကောင်းဆုံးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်ရှိသောဆက်သွယ်ရေးစနစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုဝါယာကြိုး input ကိုဖွဲ့စည်းပုံရှိပါတယ်။ M20 static eliminator ကို gasket တစ်ခုနှင့် conductor တစ်ခုဖွဲ့စည်းရန် ဦး ထုပ်တစ်ခုတပ်ဆင်ထားရန်လိုအပ်သည်။ အဲဒါ ...
အမျိုးအစားပစ္စည်းအနားကွပ်အကွာအဝေးအပေါက်အကွာအဝေးအလုပ်ဖိအားအပူချိန်အကွာအဝေး DN40 (1.5″) လူမီနီယမ်အလွိုင်း 85 110 0.6MPA (-20, +70) DN50 (2″) 90 125 DN65 (2.5″) 115 145 DN80 (3″) 130 160 DN100 (4″) 155 180 DN100 (4″) 275 240